प्रक्रियाका कारण आयोजना छिटो गर्न सकिन्न | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता प्रक्रियाका कारण आयोजना छिटो गर्न सकिन्न
on: April 08, 2018 अन्तरवार्ता
प्रक्रियाका कारण आयोजना छिटो गर्न सकिन्न
उपभोक्ताले लोडशेडिङ आफ्नो नियति मानिसकेको अवस्थामा अचानक चमत्कारझैं लोडशेडिङको अन्त्य भयो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा आएको सुधारले यसका सेवादायी संस्थाका नेतृत्वकर्ता एकाएक लोकप्रिय भए । उपभोक्ताबाट सहयोग माग्दै चुस्त सेवा दिँदै गएका उनमा रहेको व्यवस्थापकीय दक्षताले विस्तारै अन्धकारबाट मुक्ति हुँदै विकासमा ऊर्जाको योगदानको मार्गमा देश अघि बढेको छ । उपभोक्तालाई कसरी उच्चस्तरीय विद्युत् दिने भन्ने सम्बन्धमा अहोरात्र खटिरहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग आर्थिक अभियानका लागि दुर्गा लामिछाने र सञ्जीव शर्माले गरेको कुराकानी :
तपाईंले अघि बढाउनु भएको इनर्जी बैङ्किङ र ब्याट्री बैङ्किङको विषय कहाँ पुगेको छ ?
विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न धेरै देशहरूले इनर्जी बैङ्किङको प्रक्रिया अपनाउँछन् । भारतमै पनि राज्य राज्यमा यो व्यवस्था छ । हाम्रोमा पनि शुरू गर्नुप¥यो भनेर गत साल दिल्लीमा पावर एक्स्चेञ्ज कमिटी (पीईसी)को मिटिङ भएको थियो । हाम्रो नजीकको राज्य बिहार र उत्तर प्रदेशका युटिलिटीहरूसँग बसेर छलफल गर्‍यौं । उनीहरू यसमा सकारात्मक छन् । उता र यताको राम्रो मेल के छ भने हाम्रोमा वर्षायाममा विद्युत् सरप्लस हुने, त्यही समयमा उता अत्यधिक गर्मीका कारण फ्यान, एसी तथा फ्रीज बढी चल्ने हुँदा विद्युत् बढी माग हुन्छ ।
त्यसलाई धान्न हाम्रो विद्युत् उता सहयोगी हुन्छ । त्यसैगरी हिउँदमा यता कम विद्युत् उत्पादन हुने बेला उताको माग घटेको र उनीहरूसँग विद्युत् सरप्लस हुने अवस्था हुन्छ । यही एक अर्कासँगको माग र पूर्तिको फरक अवस्थाको सदुपयोग इनर्जी बैङ्किङमार्फत गर्ने भन्ने योजना हो । यो व्यवस्था हुन सक्यो भने हाम्रो लागि त हिउँदमा जलाशययुक्त आयोजना भएसरह नै हुन्छ । दुवै देशका ऊर्जासचिवहरूको ज्वाइण्ट स्टेयरिङ मिटिङ चाँडै हुँदै छ, त्यसमा पनि यो विषय राख्छौं ।
ब्याट्री बैङ्किङको विषयचाहिँ के हुँदै छ ?
विश्वमा विद्युत् स्टोरेज गर्ने ब्याट्रीको मूल्य घट्दै गएको हुँदा हामीले पनि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा राख्ने भन्ने योजना हो । त्यसका केही प्रक्रियाहरू बाँकी छन् । ब्याट्री भएपछि रातिको समयमा प्रयोग नभई खेर जाने विद्युत् त्यसमा स्टोर गरेर राखी बिहान र बेलुकाको उच्च विद्युत् माग हुने (पीक आवर)मा उपयोग गर्ने भन्ने हो । १०–२० मेगावाट (मेवा) क्षमताका केही सङ्ख्यामा ब्याट्री देशका विभिन्न स्थानमा राख्न पाए पिकिङ दिने, भोल्टेज, ऊर्जाको गुणस्तर र विश्वसनीयता पनि बढाउँछ ।
ब्याट्रीको आयु सकिएपछि व्यवस्थापनमा वातावरणमा समस्या हुने भन्ने कुरा पनि छ नि ?
वातावरणमा असर नगर्ने ब्याट्रीहरू पनि आएको भन्ने कुरा पनि छ । त्यसलाई बुझेर नै अघि बढाउँछौं ।
स्मार्ट मिटरको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
स्मार्ट मिटरको प्याकेज नै छ, जसअन्तर्गतको मिटर, अण्डरग्राउण्ड विद्युतीकरणलगायतका सबै कुराहरू बोलपत्र आह्वानकै क्रममा छन् । निजीक्षेत्रले भए हामी नै किन्ने, हामी नै गर्ने भन्ने हुन्थ्यो, सरकारीमा सजिलो छैन । जसले गर्दा केही समय लिए पनि विद्युतीय प्रणालीभित्र केही महत्वपूर्ण परिवर्तन भने ल्याउँछ ।
नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको सन्दर्भमा एउटा प्रदेशमा उत्पादित विद्युत् सो प्रदेशले अर्को प्रदेशमा विक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिलेसम्म विद्युत्को प्रसारण तथा वितरण केन्द्रीय रूपबाट हुँदै आएको छ । राज्य त पुनःसंरचना भयो, अब विद्युतीय प्रणालीको कसरी पुनःसंरचना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलहरू चलिरहेका छन् । अहिलेसम्म भएको हाम्रो (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) तथा निजीक्षेत्रका विद्युत् उत्पादन विभिन्न प्रदेशमै छन् । भोलि प्रदेश आफैले पनि उत्पादन गर्न सक्छन् । अहिले प्राधिकरण (केन्द्र सरकार)ले विद्युत् उत्पादन गरेजस्तै भोलि प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचनाबाट १० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन गर्छु भन्यो भने आधिकारिक रूपमा पाउने व्यवस्था नै भइसकेको छ । हामीले ७ ओटा प्रदेशका लागि ७ ओटै वितरण प्रणाली बनाउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि अहिले प्राधिकरणको शतप्रतिशत शेयर भएका ७ ओटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । तिनीहरूको स्वायत्त प्रकृति हुन्छ र उनीहरूको हिसाब–किताब उहीँ हुन्छ । यदि त्यो सेवा प्रदेशले म चलाउँछु भन्यो भने त्यो कम्पनी प्रदेश मातहतमा पनि हुनसक्छ । यसका लागि त्यसको समग्र लेखादेखि धेरै कुरा मिलाउनु पर्छ ।
अर्को कुरा, हामीले प्राधिकरणकै सहायक पावर ट्रेडिङ कम्पनी पनि खोलेका छौं । त्यो कम्पनीले नेपाल–भारतसँगै आफ्नै देशभित्रको प्रदेश–प्रदेशबीचको विद्युत् व्यापार पनि गर्न सक्छ । जसअनुसार वितरण कम्पनीलाई उक्त कम्पनीले कति रुपैयाँमा बेच्ने, प्राधिकरणबाट किनेर बेच्ने कि निजीक्षेत्रबाट किनेर बेच्ने निर्णय गर्नसक्छ । अन्ततः विद्युत् व्यापारको त्यो संयन्त्र बन्छ । त्यसैगरी, प्रसारण विद्युत्को हाइवे भएकाले यसमा केन्द्रीय राज्य (प्राधिकरण)को नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसबाट जसले जति विद्युत् प्रसार गर्छ, त्यहीअनुसार महशुल उसले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरण एक्लै हुँदा लामो प्रक्रिया तथा समयमा प्रसारण परियोजना सम्पन्न नहुने जस्ता समस्या आइरहेका सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले आफूहरू पनि निर्माण र हस्तान्तरण (बीटी) मोडलमा प्रसारण परियोजना निर्माण गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा सम्भावना कत्तिको छ ?
बीटी मोडल भनेको पनि ठेक्का जस्तै हो । त्यसमा म लगानी गरेर बनाउँछु र तिमीलाई दिन्छु, मलाई त्यसको प्रतिफलसहित एकमुष्ट फिर्ता देऊ भन्ने हुन्छ । उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न जति समय लाग्छ, त्यो अवधिको बैङ्कले दिने ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजसहितको प्रतिफल उनीहरूको चाहना हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई बीटी मोडलमा बनाउन दिने भनेर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने भनेको छ, तर कार्यविधि आएको छैन । प्रसारण लाइन बनाऊ भनेर सोझै कसैलाई दिन मिल्दैन । त्यसका लागि पनि बोलपत्रको प्रक्रिया गर्नुप¥यो र इच्छुकले त्यही प्रक्रियाबाट आउनु पर्‍यो ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण कम्पनीसँगै स्थापित विद्युत् व्यापार कम्पनीले कसरी काम गर्दै आएको छ ?
खासमा त यो प्राधिकरणको पुनःसंरचना नभई विद्युत् क्षेत्रका लागि विस्तार गरेको मात्र हो । हिजोसम्म विद्युत्सम्बन्धी निकाय प्राधिकरण एउटा मात्रै थियो । म त भन्छु, यस्ता निकाय जतिसक्दो धेरै आउनु पर्छ । एउटा असफल भयो भने अर्कोले काम गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ ।
जस्तै : चिलिमेले ४ ओटा प्रोजेक्ट अघि बढायो । जसमा एउटा असफल भए पनि अरूले काम गर्छन् । यदि हिजो १० ओटा कम्पनीले विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न पाएको भए प्राधिकरण अप्रभावकारी हुँदा अरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्थे ।
त्यसैले विद्युत्को क्षेत्रमा यसरी धेरै निकाय आउनु प्राधिकरणकै लागि पनि राम्रो कुरा हो । जसरी निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादनको अधिकार नपाउञ्जेल प्राधिकरण मात्रैले धेरै आयोजना बनाउन सकेको थिएन, निजीक्षेत्र आइसकेपछि एकाएक यसमा प्रगति भएको छ । अहिले निजीक्षेत्रका कारण प्रत्येक महीनामा एउटा आयोजना सञ्चालन भई वर्षको करीब २ सय मेवा विद्युत् थपिने अवस्था सृजना भएको छ । निजीक्षेत्रको प्रवेश नभई प्राधिकरण एक्लैको भरमा भएको भए अहिले हामीसँग जति राष्ट्रिय उत्पादन छ, त्यो सम्भवै थिएन । प्राधिकरणलाई टुक्रा गर्नुपर्छ भन्यो भने ठूलो रुवाबासी हुन्छ । तर, प्राधिकरणले १० ओटै कम्पनी खोले पनि त्यसमा त विरोध आउँदैन । तामाकोशी, माथिल्लो अरुण सबै प्रभावकारी रूपमा चलिरहेका छन् । भोलिका दिनमा अहिले रहेका उत्पादनको एउटा कम्पनीका रूपमा प्राधिकरण रहन्छ, बाँकी अन्य कम्पनीको हुन्छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत शेयर भएको प्रसारण कम्पनी छ, त्यसले राम्ररी काम गर्न सक्यो भने प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको यो काम त्यता पनि जान्छ । कालान्तरमा प्राधिकरण आफ्नो हिस्सा लिएर प्यारेण्ट कम्पनीका रूपमा रहन सक्छ । विद्युत् व्यापार कम्पनी भने स्थापना भए पनि अहिले नै सञ्चालनमा आउन गाह्रो छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा केही सङ्ख्यामा ब्याट्री राख्न पाए पिकिङ दिने, भोल्टेज, ऊर्जाको गुणस्तर र विश्वसनीयता पनि बढाउँछ ।
हामीले ७ ओटा प्रदेशका लागि ७ ओटै वितरण प्रणाली बनाउन खोजिरहेका छौं ।
प्रसारण लाइन बनाऊ भनेर सोझै कसैलाई दिन मिल्दैन ।
निजीक्षेत्रको प्रवेश नभई प्राधिकरण एक्लैको भरमा भएको भए अहिले हामीसँग जति राष्ट्रिय उत्पादन छ, त्यो सम्भवै थिएन ।
उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने अहिले २५ सय मेवा विद्युत् पनि खपत हुन्छ ।
प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्ने भनेको माग पोहोर मात्रै २७ प्रतिशतले बढेको छ ।
कुलेखानीसहित सबै दिनभरि चलाउने हो भने करीब १ सय ८० मेवा उत्पादन हुन्छ ।
म आउनुभन्दा अघि पनि ३ सय ४० मेवासम्म आयात गरिएकै थियो ।
बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदार छान्न २ वर्ष लाग्छ । राम्रो ठेकेदार पर्‍यो भने ५ वर्षमा सकाउँछ ।
त्यही ठेकेदारले त्यति नै काम चीनमा ग¥यो भने ६ महीनामा सक्छ, यहाँ ६ वर्ष लगाउँछ ।
काम नगर्ने ३ ओटा ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेको छु । विरोध आउँछन्, तर मैले त समग्र राष्ट्रिय हित हेर्नु पर्‍यो नि ।
त्यस्तै, व्यापारतर्फ नयाँ कम्पनी आउनेबित्तिकै विद्युत् व्यापारको अर्बाैं/खर्बौं रुपैयाँको दायित्व लिनुपर्छ । नयाँ कम्पनीमा आयोजनाहरू विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न जानु पर्‍यो, ती आयोजनामा बैङ्कले फाइनान्स गरिदिनु पर्‍यो । किनकि नयाँ कम्पनीसँग ब्याकअप हुँदैन । प्राधिकरणसँग त सरकार नै ब्याकअप छ । शुरुआत कालका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनीले आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने र लगत्तै ती आयोजनाहरूसँग प्राधिकरणले पनि पीपीए गरेर ब्याकअपको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पछि त विस्तारै कम्पनी आफै सक्षम र विश्वसनीय भइहाल्छ ।
एकातर्फ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स), लगानी बोर्ड (आईबीएन), राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी) लगायतले सार्वजनिक गरेका विद्युत् माग प्रक्षेपण फरकफरक छन्, अर्कातर्फ उनीहरू सबैको अनुमानभन्दा निकै कम विद्युत्मै पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ । यसो हुनुको कारण के
खासमा अहिलेको हाम्रो उच्च विद्युत् माग (पीक डिमाण्ड) १८ सय मेगावाट (मेवा) हो । त्यो भनेको लोडशेडिङ भएको समयको हिसाब गरेर आएको माग हो । यदि अटुट रूपमा विद्युत् आइरहन्छ भन्ने विश्वास उपभोक्तालाई दिलाउन सक्ने हो भने अहिले २५ सय मेवा विद्युत् पनि खपत हुन्छ । विद्युत् नभएर मात्रै होइन, वितरण प्रणाली मागअनुसारको भार थाम्न नसक्ने भएर पनि दिन सकिएको छैन । वीरगञ्ज क्षेत्रमा अहिले २ सय मेवाको माग छ, तर त्यहाँको वितरणको सबस्टेशन तथा लाइनमा ओभरलोड भएका कारण दिनै सकिएको छैन । खासमा विद्युत् दिनसक्ने हो भने माग बढ्छ र माग बढ्यो भने थप विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले माग प्रक्षेपण गर्दा उच्च विन्दुकै गर्नुपर्छ ।
मानौं यसपालिको माग १५ सय मेवा हो भने २ हजार मेवा हो भनेर प्रक्षेपण गरे मात्रै वास्तविक माग पूरा गर्न सक्छौं । मागकै कुरा गर्ने हो भने, प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्ने भनेको माग पोहोर मात्रै २७ प्रतिशतले बढेको छ । पीक आवरमा उपभोक्ताका साथ, सामान्य समयमा पिकिङ आयोजना नचलाएर पीक आवरमा मात्रै उत्पादन र आयात लगायतले गरी १८ सय मेवाको पीक डिमाण्डलाई १३ सय मेवामा स्थिर राख्न सकिएको छ ।
कतै तपाईँ इञ्जिनीयरिङ मात्रैको नभई व्यवस्थापनको पनि विद्यार्थी हुनुको प्रभाव विद्युत् व्यवस्थापनमा परेको त होइन ?
प्राविधिक पक्षको व्यवस्था मिलाउन इञ्जिनीयरिङको ज्ञानले काम ग¥यो । त्यसैगरी, उपभोक्ताको उपभोग व्यवहारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कुराचाहिँ व्यवस्थापन विषयको ज्ञानबाटै आएको हो । हामीले पोहोरको लक्ष्मीपूजाबाट काठमाडौंमा लोडशेडिङ हट्छ भन्यौं र हटायौं । त्यसपछि उपभोक्तालाई सहयोगको आह्वान ग¥यौं र सहयोग पनि मिल्यो । यदि लोडशेडिङ नघटाई आह्वान गरेको भए सहयोग मिल्ने थिएन । उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसो भएकाले प्राधिकरणले के भन्दै छ भनेर उपभोक्ताले ध्यान दिएर सुने र सोहीअनुसार गरे । यसले धेरै ठूलो सहयोग गरेको छ । यो भावनात्मक सम्बन्ध बनाउन सक्नु व्यवस्थापन हो ।
त्यस्तै प्राविधिक व्यवस्थापन हो । उपभोक्ताले बेलुका ५ बजेदेखि १० बजेसम्म कतै पनि बिजुली गयो भने लोडशेडिङ महसूस गर्छन् । त्यो बेला सबैतिर दियो । राति १० बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म लाइन नभए पनि खास असर पर्दैन । त्यो बेला कालीगण्डकी आयोजना (पिकिङ) बन्द गरेर रातभरि पानी जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणका ५ सय १० मेवाका आयोजनामध्येबाट अहिलेको पीक आवरमा पनि ४ सयदेखि ५ सय मेवा उत्पादन हुन्छ । तर कुलेखानीसहित सबै दिनभरि चलाउने हो भने करीब १ सय ८० मेवा उत्पादन हुन्छ । निजीक्षेत्रका आयोजना सबै नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) छन् । जसले गर्दा निजीक्षेत्र र प्राधिकरणका सबै दिनभरि चलाएको भए यो समयमा करीब ३ सय मेवा मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । अनि १२ सय मेवाको माग ३ सय मेवाले धान्न कहाँ सकिन्थ्यो ? तर, त्यो पीक आवरको भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, राति कसरी मिलाउने, कतिबेला कुन आयोजना चलाउने, कुन आयोजना कहिले मर्मत गर्नेजस्ता कुराहरू सबै तालिका मिलाएर गरेपछि आजको अवस्था आएको हो ।
यी कुराहरू अहिलेसम्म नहेरेको विषय थियो । त्यसपछि नपुगेको अलिकति आयात गरेका छौं । आयात पनि कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्थापनमै आउँछ । म आउनुभन्दा अघि पनि ३ सय ४० मेवासम्म आयात गरिएकै थियो । तर, कसरी आयात गर्ने भन्ने तरीका थिएन । अहिले मैले राति कालीगण्डकी बन्द गरेका बेला अलिकति आयात गरेर त्यतिबेलाको न्यूनतम माग धानेपछि पुगिहाल्यो । आयात गर्न पनि कहाँबाट सस्तो पर्छ, त्यहाँबाट बढी ल्याएर महँगो पर्नेबाट कम ल्याइएको छ । अर्कोतर्फ लोड धान्न नसक्ने ट्रान्सफर्मर थिए । १ वर्षमा सबै सबस्टेशनमा ट्रान्सफर्मर परिवर्तन, लाइन परिवर्तन, मर्मत सबै काम गरिएको छ । यीसँगै चोरी नियन्त्रण गरेका कारण प्राधिकरण ९ महीनामा नाफामा गएको हो । ३५ रुपैयाँ लिटरको डिजेलबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उद्योगलाई ८ रुपैयाँ युनिटको बिजुली दिनतिर व्यवस्थापन लागेकाले यी सबै कुराको व्यवस्था गर्न ध्यान जान सकेको थिएन ।
प्राधिकरणका जलविद्युत् तथा प्रसारण जुनसुकै आयोजना पनि सम्पन्न हुन ढिलो हुनुको कारण के हो ?
प्रमुख कारण प्रक्रिया हो । बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदार छान्न २ वर्ष लाग्छ । राम्रो ठेकेदार प¥यो भने ५ वर्षमा सकाउँछ । दोस्रो, ठेकेदार र कन्सल्ट्याण्ट हो । त्यही ठेकेदारले त्यति नै काम चीनमा ग¥यो भने ६ महीनामा सक्छ, यहाँ ६ वर्ष लगाउँछ ।
किनकि ऊ चीन सरकारको सहायक कम्पनीको ठेकेदार हो । सरकारको कम्पनी भएकाले नाफा÷घाटा नहेरी गर्छ । त्यही ठेकेदार यहाँ आएर सबैभन्दा कम लागतको प्रस्ताव हाल्छ र शुरू दिनदेखि प्रोजेक्ट कसरी हात पार्ने र नाफा कसरी निकाल्ने भन्नेतिर ध्यान दिन्छ । सकिन सकिन लागेपछि त झन् यति पैसा नदिए यो पनि काम गर्दिनँ, त्यो पनि गर्दिनँ भन्छ । कन्सल्ट्याण्टको पनि ध्याउन्न अवधि बढाउने र कमाइरहने हुन्छ । अनि कन्सल्ट्याण्ट र ठेकेदार मिले भने त कामै हुँदैन । सरकारी तवरमा कुनै विवाद भयो भने ठेकेदार प्रभावित भइहाल्ने, एउटाले गरेन भनेर ठेक्का तोडौं, अर्को ठेक्का गर्न अर्को ३ वर्ष लाग्छ, अनि कसरी काम हुन्छ ?
तैपनि काम नगर्ने ३ ओटा ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेको छु । विरोध आउँछन्, तर, मैले त समग्र राष्ट्रिय हित हेर्नु प¥यो नि । जलविद्युत् होस् वा प्रसारण आयोजना, निर्माणका धेरै पक्षमा सुधारको खाँचो छ ।
सरकारको मातहतमा थुप्रै निर्माण कम्पनीहरू खोल्ने । कन्सल्ट्याण्ट आफ्नै देशको राख्ने । विदेशी कन्सल्ट्याण्ट आवश्यक परे सरकारी कम्पनीमै अवधिका लागि ल्याउने र उनीहरूसँगै हाम्रा जनशक्ति पनि लगाएर हाम्रो जनशक्तिलाई सक्षम बनाउने ।